Fandefasana Ho An’ny Fitondràna Miaramila Ao Thailand, Midika Fiantsoana Hikomy Sarinà Tsatokaty Mena Ao Amin’ny Facebook · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Avrily 2016 2:44 GMT
Taorian'ny nandefasany ity sary ity tao amin'ny Facebook, nampangaina ho mpikomy ilay olona mitana ilay tsatokaty mena. Sary : Human Rights Watch
Nosamborina ny olona iray mpampiasa Facebook ao Thailand ary nampangaina ho mpikomy noho ny nandefasany sarinà tsatokaty mena iray fanomezana voarainy tamin'ny Praiminisitra teo aloha, Thaksin Shinawatra.
Ilay tsatokaty, iray amin'ireo marobe nozaraina tamin'izany fotoana izany ho an'ireo mpanohana an'i Thaksin tany avaratr'i Thailand, dia natao ho ampiasaina nandritry ny fetin'ny rano, fomban-drazana fanao mahazatra ao anatin'ny fetibe Songkran, fantatra ihany koa amin'ny hoe Taombaovao Thai, amin'ity volana ity.
Voahiliky ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2006 i Thaksin saingy mbola mijanona foana ho malaza eny anivon'ireo mpifidy. Taorian'ny nahitàna fa meloka noho ny fanaovana kolikoly izy, nandeha nanao sesitany ny tenany izy mba hialàny amin'ny fampidirana am-ponja. Tamin'ny 2011, ny zandriny vavy, Yingluck, no voafidy ho praiminisitra. Nesorin'ny tafika tsy ho eo amin'ny fitondrana izy avy eo, ny May 2014, ary ny tafika no manohy mitarika ny firenena amin'ny alàlan'ireo manampahefana notendreny. Nampanantena izy ireo hamerina ny fitantanana ho an'ny sivily vantany vao tafapetraka ny fanavaozana ny politika sy ny fifidianana, saingy mbola tsy nisy aloha izany hatreto.
Maro amin'ireo mpanohana an'i Thaksin no mpikambana ao anatin'ilay antsoina hoe ‘Lobaka Mena’ izay nanao ireo famoriambahoka goavana tao Bangkok tamin'ny 2010. Noraràn'ny miaramila ny hetsipanoherana fanaon'ny vahoaka, isan'izany ireo hetsiky ny Lobaka Mena sy ny antokon'i Thaksin (Pheu Thai), amin'ny anaran'ny fahamarinan-toerana politika.
Nampangain'ny tafika i Thaksin ho manandrana mamafy fizarazaràna eo amin'ny firenena, amin'ny alàlan'ny fandrisihana ireo mpomba azy hankahatra ireo manampahefana. Nolavin'i Thaksin io fiampangàna io. Ny Janoary lasa teo, noraràn'ny fitondrana miaramila ny fizarana tetiandro izay misy ny sarin'i Thaksin sy Yingluck.
Misy ity hafatra ity ilay tsatokaty mena nampiasaina ho anton'ny fisamborana ilay mpampiasa Facebook:
Mety hafàna ny toe-draharaha, saingy mety hangatsiatsika noho ny rano avy ao anatin'ity tavy ity ireo rahalahy sy anabavy.
Nihetsika haingana be ireo manampahefana Thai ary nisambotra ilay mpampiasa Facebook, ramatoa iray 57 taona avy any avaratr'i Thailand. Navotsotra izy rehefa namoaka fanekena handoa onitra eo amin'ny 2.800 dolara amerikana eo. Raha hita fa meloka izy, mety handany hatramin'ny fito taona any an-tranomaizina.
Niaro ilay fiampangana ho mikomy i Prayuth Chan-ocha, mpitari-tafika fahiny ary praiminisitra amin'izao fotoana izao:
[Fihetsiketsehana] fanehoana fanohanana ho an'ireo olona nanitsakitsaka ny lalàna ary nandositra ny fiampangana azy ho nanao heloka bevava io.
Miaina anatinà firenena iray aho, izay fikomiana & loza mitatao ho an'ny filaminam-pirenena no dikan'ity tsatokaty mena ity
Mandritra izany, ny mpanangombaovaon'ny gazety iray izay namoaka ilay tantara dia ‘notazonin'ny’ tafika ihany koa. Navela nody ilay mpanangombaovao saingy nilazàna tsy hanoratra intsony tantara hafa “mamitaka”.
Tohin'izany dia nanao bemidina tany an-tranon'ny politisiana iray fahiny ny tafika ary nangihy tsatokaty efa ho 8.000 mahery avy tamin'i Thaksin misy ity hafatra ity:
Arahaba nahatratra ny Andron'ny Songkran 2016, amin'ity Songkran ity, tena malahelo mafy ireo rahalahiko sy anabaviko tokoa aho ary maniry ny hanampy anareo hamaha olana, saingy mialoha izany dia tiako ny mandefa fankaherezana, fitiavana ary ny fisainako ho anareo.
Natao hozaraina amin'ny fotoana hanaovana ny fetibe Songkran ireo tsatokaty mena ireo.
Nanamarina ilay bemidina nataony ny tafika ary niampanga an'i Thaksin ho mamafy korontana amin'ny fametrahana ny sariny sy ny anarany amin'ireo tsatokaty mena. Etsy ankilany, antsoin'i Thaksin ny fitondràna miaramila mba hifantoka amin'ny fiatrehana ireo olan'ny firenena fa tsy izay fanomezana nalefany ho an'ireo mpifidy azy akory.
Very fanahy ny #tafika ao #Thailand. Ny loza mitatao farany indrindra ho an'ny filaminam-pirenena ve ? Tsatokaty mena iray
Manasongadina ilay tsatokaty sy ny sarin'ireo praiminisitra roa naongana tao Thailand teo aloha, Yingluck (havia) sy Thaksin (havanana) ny bitsika eto ambony.
Tsy mbola mazava raha hametraka fitoriana hanenjehana ireo mpitarika nizara ireny tsatokaty mena ireny ny governemanta na tsia, fa ny tsilian-tsofina avy amin'ny tafika milaza fa tsy maintsy hiharan'ny fitsipi-pitondrantena ireo mpiaradia amin'i Thaksin sy ireo mpikambana ao amin'ny antokony. Mitovy amin'ilay fotoana ‘fanarenana fitondrantena’ omen'ny tafika ho an'ireo mpikatroka, mpanao gazety ary politisiana manakiana ny governemanta.
Tanisain'ireo mpikatroka sy mpiaro zon'olombelona ho porofo iray hafa amin'ny “tsy fandeferan'ny fitondrana miaramila amin'ireo tsy mitovy hevitra aminy ” ny raharaha ‘tsatokaty mena’. Brad Adams avy amin'ny Human Rights Watch manampy hoe :
Mampiseho ny tsy fahaizany mandefitra amin'ireo tsy mitovy hevitra aminy ny fahatahoran'ny fitondrana miaramila Thai an'ilay tsatokaty plastika miloko mena, ka tonga hatrany amin'ny teboka manamarika ny hadalàna tanteraka. Rehefa manenjika olona noho ny fikomiana ny fitsaràna miaramila, noho ny famoahana sarinà fanomezana noho ny fety natolotr'ireo mpitondra voaongana, dia mazava fa tsinjo eny rehetra eny ny fiafaràn'ny famoretana.
23 ora izaySingapaoro